Momba anay - Beijing Convista Flow Control Equipment Co., Ltd.
CONVISTA dia natokana amin'ny fikarohana sy famatsiana karazana fitaovana fanaraha-maso toy ny Valve, fihetsika fanaraha-maso sy fanaraha-maso, Paompy sy fitaovana hafa mifandraika amin'ireny Flanges & Fittings, Sivana sy sivana, Fifanarahana, metatra mikoriana, Skids, Casting & forging fitaovana etc.
CONVISTA dia miantehitra amin'ny teknolojia matihanina sy serivisy tsara indrindra hanome vahaolana azo antoka, fitsitsiana angovo ary ho an'ny tontolo iainana. Ity vahaolana ity dia afaka manome azy ireo Valve, Valve actuation & Controll, Pumps ho an'ireo fampiharana sarotra indrindra manerana ny fantsom-pandefasana solika sy gazy, fanadiovana sy petrochemical, simika, arina simika, herinaratra mahazatra, harena ankibon'ny tany sy harena an-kibon'ny tany, fisarahan-drivotra, fanamboarana, rano fisotroana & Rano maloto sy sakafo ary zava-mahadomelina sns. Ny serivisy serivisy misimisy dia mihodina amin'ity portfolio mifantoka amin'ny mpanjifa ity.
CONVISTA dia mpamatsy iraisam-pirenena Valves, Fanetsehana valve & fanaraha-maso, paompy ary fitaovana mifandraika amin'ireto faritra fampiharana ireto
Injeniera momba ny dingana
Tsiranoka mahery setra sy mipoaka
Rano madio na voaloto
Tsiranoka manimba sy manintona
Fangaro sy ranoka matevina / matanjaka
Faharetana sy andraikitra
Ny asan'ny orinasa CONVISTA sy ny andraikitra ara-tsosialy dia mifantoka amin'ny fahatratrarana maharitra, ho an'ny fitsinjovana angovo sy ny tontolo iainana hiantoka ny tombony maharitra ho an'ny tontolo iainana sy ny olombelona.
CONVISTA dia manohana ny tanjon'ny Kyoto Protocol ary manome lanja lehibe ny fahombiazan'ny angovo tsara indrindra ho an'ny vokatra sy teknolojia rehetra. Ho fanampin'izany, ny fizotran'ny asa sy ny tontolon'ny asa dia natao hitaky angovo kely sy ireo akora vitsivitsy faran'izay mety.
Fahasalamana sy fiarovana amin'ny mpiasa ho an'ny mpiasa
Mba hiantohana ny fiarovana azo antoka any amin'ny toeram-piasana, CONVISTA dia namaritra ny torolàlana momba ny EHS (Fahasalamana sy fiarovana ny tontolo iainana) ary mbola manaraka ny fenitra nasionaly sy iraisam-pirenena.
Ho mpamatsy fitaovana azo antoka azo antoka indrindra ho an'ireo mpampiasa manerantany
Manam-pahaizana momba ny vahaolana fanaraha-maso mikoriana azo antoka, mitsitsy angovo ary milamina amin'ny tontolo iainana
Misisika foana hanome fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny serivisy tso-po, henjana, matihanina ary mahomby
Araho hatrany ny fanaraha-maso henjana ny mpamatsy, ho an'ny fiaraha-miasa stratejika sy fiaraha-miaina mandresy
Misisika foana amin'ny fambolena ekipa manan-talenta amin'ny hafanam-po, fanamby ary firehetam-po
Ny mpiasa no fototra sy fototray. Ny Convista miankina amin'ny mpiasanay-ireto olona ireto dia mampihatra ny soatoavin'ny Convista, mikatsaka ny fiarovana ny vokatra azo antoka sy azo itokisana, ary ny fahalalam-pomba, ny fahatsoram-po, ary koa ny fanajana ny soatoavina tsirairay, isan'andro isan'andro Ny mpiasa dia vato ho an'i Convista, miaraka amin'izay koa, i Convista dia nanolo-tena ihany koa hahomby amin'ny tsirairay. Ny fampiasam-bola Convista amin'ny teknolojia farany, ny fizotrany ary koa ny fitaovana fitantanana dia mahatonga ny tsirairay hilalao ny talentany avy hatrany.
Asa fiarovana, mpiasa salama
Reraka i Convista hahazoana antoka fa azo antoka sy salama ny toerana iasana. Manatsara hatrany isika isan-taona amin'ity lafiny ity. Ny laharam-pahamehan'ny fiarovana ny mpiasa amin'ny kolontsain'ny fikambanana, ny fiaraha-miasa amin'ny mpiasa ho an'ny tontolo azo antoka sy salama, heverinay ho azo antoka sy ara-pahasalamana amin'ny asanay tsirairay avy, miorina amin'izany, miasa hatrany izahay ary manome antoka fa mahatakatra sy tompon'andraikitra amin'ny fikirakirana isan-karazany. ho fiantraikan'izany.
Mametraka sy mamolavola rafitra fitantanana azo antoka sy ara-pahasalamana izahay, toeram-piarovana fiarovana tsara, fitaovana ary fizaham-pahasalamana tsy tapaka izay manome antoka ny toerana hiasana sy ny fahasalaman'ny mpiasa. Convista dia nanangana rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa, rafi-pitantanana tontolo iainana, tanjona ny hanomezana toerana ho an'ny mpiasanay asa azo antoka.
Fampivoarana ny mpiasa
Fanofanana sy fampandrosoana ho an'ny mpiasa hamporisihana sy hanohanana ny mpiasa handinika ny fahaizany
Manolo-tena foana izahay hanome ny talenta feno sy hampiasa tsara ny zavatra rehetra. Izahay dia manao drafitra fampandrosoana ny asa manokana ho an'ny mpiasa tsirairay, mifototra amin'ny toe-javatra misy azy ireo. Manome fiofanana ho an'ny mpiasa eo anoloana izahay, ary manome fiofanana momba ny fitantanana ho an'ny fitantanana, manome fianarana diplaoma ambony ho an'ny mpiasa teknisiana sns. Ireo rehetra ireo dia manampy ny mpiasa tsirairay hitombo amin'ny fotoana fohy.
Ekena sy deraina ny mpiasa
Isan-taona dia manombatombana ny fahaiza-miasa tsara indrindra izahay ary miaraka amina mpitarika ny laharana voalohany amin'ny maha teknisiana anay ary manome
bonus ho azy ireo isam-bolana sy isan-taona. Inona koa, manombana ny kalitaon'ny olona mandroso koa izahay
fitaovana mitazona ny tsirairay ary manome bonus ho azy ireo.
Ny teny filamatra anananay dia ny fanombohana orinasa, mizara ny voankazo.
Heverinay fa, Convista dia toy ny fianakaviana iray kokoa noho ny orinasa iray, ny mpiasanay dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana, mihazakazaka amin'ny sanda iray sy tanjona kendren'ny orinasa izy io. Mihaona amin'ny saran'ny mpiasa, sanda ekipa orinasa ary mamorona efitrano fampivelarana sy fampiroboroboana ho an'ny mpiasa. Ny mpiasa mijoro miaraka amin'ny orinasa ary mizara ny voankazo fanombohana.
Isan-taona ny Convista dia mankalaza ny Fetin'ny Lohataona, hisaorana ny fandraisana anjaran'ny mpikambana tsirairay.